रिङ्कीलाई कसले खुवायो गर्भपतनको औषधि ? | प्रतीक दैनिक - Prateek Daily
Home समाचार स्थानीय रिङ्कीलाई कसले खुवायो गर्भपतनको औषधि ?
रिङ्कीलाई कसले खुवायो गर्भपतनको औषधि ?
राधेश्याम पटेल/धर्मेन्द्र चौरसिया
बैरिया (पर्सा), २ फागुन/
पर्सामा थप एकजना किशोरीको अनाहकमा मृत्यु भएको छ। समाजमा लोकलाजको डरले उनको ज्यान गएको हो। घटना हो, पर्सा, पोखरिया नगरपालिका वडा नं ९ बैरियाटोलको। गत शुक्रवार बिहान बैरियाका बलि मुखिया बिनकी १६ वर्षीया छोरी रिङ्की कुमारीको शङ्कास्पद मृत्यु भएको हो। अन्दाजी ५ महीनाको गर्भवती अवस्थामा उनलाई गर्भपतन गराउने औषधि खुवाएर हत्या गरिएको शङ्का छ। कक्षा ५ सम्म गाउँकै विद्यालयमा अध्ययन गरी करीब ४ वर्ष पहिले पढाइ छाडेकी किशोरीको गाउँकै एक युवकसँग प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। गर्भवती भएपछि गर्भपतन गराउन स्थानीय औषधिपसलबाट औषधि खुवाउँदा सोही औषधिले उनको ज्यान गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
पर्सा प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार उक्त घटना शङ्कास्पद देखिएको र शल्यपरीक्षण रिपोर्टमा उनी गर्भवती रहेको पुष्टि भएपछि घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको बताए। गाउँलेका अनुसार किशोरीको परिवारजन र प्रेमी केटाकै उक्साहटमा रिङ्कीलाई औषधि सेवन गराइएको हो।
गत शुक्रवार बिहान अचानक छटपटाउन थालेर बेहोश भएकी रिङ्कीलाई उपचारको लागि बिहान ५ बजे पोखरिया अस्पतालमा लगिएको थियो। तर उनको ज्यान बाटैमा गइसकेको परिवारजनले बताएका छन्। रिङ्कीका बुबा बलि मुखिया बिनले आफूहरूले छोरीलाई औषधि नदिएको बताउँछन्। उनले भने, “छोरी गर्भवती छिन् भन्ने हामीलाई बताइन, हामीलाई पनि केही थाहा भएन, उनको मृत्यु भएपछि सबैजना शोकमा डुबेका छौं।” रिङ्कीकी आमा सङ्गीताले पनि आफू बिहान शौच गर्न गएको बेला छोरीको अवस्था बिग्रेको सुनाइन्। “म बिहान साढे ४ बजे घरबाट सरेहमा गएको थिएँ, फर्केर हेर्दा उनी छटपटाउँदै थिइन्, बेहोश भएपछि हस्याफस्याङ गर्दै अस्पताल लैजाने तयारी गर्दागर्दै छोरीको मृत्यु भयो।”
परिवारजनले पोखरिया प्रहरीमा दिएको निवेदनमा गाउँका एकजना युवकमाथि शङ्का रहेको बताएको छ। ती युवक फरार छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाले भिसेरा रिपोर्ट आएपछि तथ्य कुरा खुल्न सक्ने बताए। उनको मृत्युको कारण ओभरडोजले भएको हो कि भन्ने शङ्का रहेको प्रनि थापाको शङ्का छ।
प्रहरीले रिङ्कीको परिवारजन, गाउँका शङ्कास्पद दुईजना युवकमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। केटाले फकाइफुल्याइ किशोरीसँग अनैतिक सम्बन्ध बनाएर गर्भवती बनाएको र औषधि खुवाएर गर्भ खसाल्न दुरुत्साहन गरेको वा परिवारजनले त्यस्तो चलाखी गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशङ्का छ।
छिपहरमाई, सखुवाप्रसौनीमा एमाले, जगरनाथपुरमा काङ्ग्रेस
धार्मिक यात्राको मीठो अनुभूति (१)
Previous articleबालबालिकाहरूलाई पर्यटनको आवश्यकता
Next articleनिजगढमा उपप्रमुख प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम शुरू
प्रस, वीरगंज, ६ जेठ/ स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत शुक्रवार पर्सा …Read More »
राजेश मिश्र ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा…’ को भावार्थ …Read More »